तपाईँले यहाँ बजार आज पाउन सक्छन् कि सबै भन्दा राम्रो कफी पेय केही मा एक नजर छ. हाम्रो सूची को शीर्ष मा Keurig छ, मूल डोनट पसल नियमित, अतिरिक्तबाक्लो मध्यम, K-कप पैक, 72 गणना. यो एक पूर्ण-bodied स्वाद छ कफी छ. यो पनि धेरै बोल्ड tastes र साथै एक उत्कृष्ट स्वाद छ. यो उत्कृष्ट कफी पिउन एक कप साँच्चै स्वास्थ्यकर साबित हुनेछ.
यो Keurig, अतिरिक्तबाक्लो मध्यम
यो Keurig, अतिरिक्तबाक्लो मध्यम, कोषेर हुन प्रमाणित भएको छ कि मध्यम भुना कफी छ. गणना आकार लागि रूपमा, यो छ डिब्बहरुमा आउँछ, जो प्रत्येक सबै पूर्ण सत्तरी-दुई K-कप पैक एक दर्जन K-कप पैक छ. तपाईं कफी आफ्नो बिहान कप प्रेम या तपाईं मात्र कफी पिउन पनि यदि एक पटक celebrate गर्न एक व्यक्ति हुन् या नगर्ने, तपाईं यस कफी पिउन प्रेम जाँदैछन्.
सान फ्रान्सिस्को खाडी OneCup
सान फ्रान्सिस्को खाडी OneCup, 80 Coffees सेवा एकल एक दुवै केन्द्रीय को मिश्रण साथै दक्षिण अमेरिकी coffees छ. यो कफी आफ्नो बिहान कुहिरो दूर खाली गर्न मदत गर्नेछ. यो कफी पूर्ण-bodied स्वाद छ र यो पनि excellently सन्तुलित छ. सान फ्रान्सिस्को खाडी OneCup पनि हरेक Keurig K-कप brewer संगत साथै कुनै पनि संगत सेवा एकल brewer संग छ. तथापि, यो चयन Keurig brewers संग प्रयोग गर्न सकिँदैन. तपाईं यस कफी पिउन किन्न जब तपाईं सकारात्मक संसारको विभिन्न भागहरु मा खेतों मा काम गर्ने हजारौं ज्यान असर जाँदैछन्. के अधिक छ, यो कफी पिउन प्रयोग अरेबिक कफी सेम तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सर्वोत्कृष्ट. तल लाइन यस कफी पिउन पिउन मात्र ठूलो छ कि छ तर पनि यो जैवअपघट्य प्याकेजिङ्ग मा प्याकेज छ. अब, तपाईं आफ्नो एकल सेवा कफी आनन्द जब तपाईं प्रदूषण योगदान गर्दै दोषी महसुस बिना त्यसो गर्न सक्छन्.
कफी विविधता पारखी पैक
तपाईं कफी विविधता पारखी किन्न जब यो कफी दैनिक विभिन्न कप दिन्छ तपाईं कफी यो बक्स प्रेम जाँदैछन् पैक. तपाईं अठार विभिन्न ब्रान्डहरु देखि flavored कफी चालीस विभिन्न एकल सेवा कप प्राप्त. सबै भन्दा राम्रो भाग कहिल्यै नक्कली ब्रान्ड प्राप्त छ. तपाईं Keurig K-कप संग संगत छ कि कुनै पनि brewer यो कफी पिउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. बेचिएको जब, तपाईं पागल कप र EKO कप जस्तै ती साथै अन्य रोमाञ्चक ब्रान्डहरु एक नम्बर सहित विभिन्न ब्रान्डहरु किन्न प्राप्त.
नेस्प्रेस्सो विविधता पैक कैप्सूल
यो नेस्प्रेस्सो विविधता पैक कैप्सूल माथि एक आगामी परीक्षा लागि अध्ययन छ लेट काम वा जो गरिएको छ कुनै लागि सबै भन्दा राम्रो कफी पिउन छ. यो कफी तपाईं परम अनुभव दिन्छ र तपाईं साइड इफेक्ट ग्रस्त जागा रहन र तपाईं थकित र अल्छी महसुस गर्न जा वा छन् भनेर चिन्ता गर्न चाहिने बिना अन्त मा घन्टा लागि केन्द्रित रहन मदत गर्नेछ. प्रत्येक बक्स फरक स्वाद को लागि दस दाना प्रत्येक समावेश. यो पनि नेस्प्रेस्सो मिसिन को हरेक प्रकार संग संगत छ र औसत कफी रक्सी न पीने वाला द्वारा प्रयोग हुने अत्यन्तै सुविधाजनक छ.